sim card reader အသုံးပြုရင် — MYSTERY ZILLION
sim card reader အသုံးပြုရင်
November 2009 edited March 2010 in Other
sim card readerအသုံးပြုပြီးphone cardပွားသုံးရင်မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကသိနိုင်လားမသိဘူး:Dသိနိုင်ရင်လဲဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်တာလဲမသိဘူး:Dအခုမေးတဲ့မေးခွန်းကနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သွာရင်အထူးတောင်းပန်ပါတယ်:65:သိချင်လို့ပါ:D
sim card readerအသုံးပြုပြီးphone cardပွားသုံးရင်မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကသိနိုင်လားမသိဘူးသိနိုင်ရင်လဲဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်တာလဲမသိဘူးအခုမေးတဲ့မေးခွန်းကနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သွာရင်အထူးတောင်းပန်ပါတယ်သိချင်လို့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ Card ကိုပွားသုံးရင် ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်၊ ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။
ပွားသုံးတဲ့အခါ ပွားထားတဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံးက တစ်ပြိုင်နက် သုံးရင် (မသုံးဘဲထားလဲ ဖုန်းကိုဖွင့်ထားရင်) သိပါတယ်။
Phone Card Reader ကို သုံးပြီးပွားတဲ့အချိန်ရော၊ ပွားပြီးနောက်ပိုင်းရော မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ Card Reader ကို Thailand နယ်စပ်ဖက်မှာ ဘတ် ၇၂၀၀ နဲ့၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းကဒ်တိုင်းကိုပွားလို့ မရပါဘူး။ အခု နောက်ထွက်တဲ့ WCDMA (GSM 1800/1900) ဆို ပွားလို့ မလွယ်ဘူး။ GSM 900 ကိုတောင် တချို့ (ကဒ်ဟောင်း) တွေသာပွားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းကဒ်ကို ပွားထားလား မပွားထားဘူးလား သိချင်ရင်တော့၊
ပထမနည်း- ဖုန်းကို တစ်လပိတ်ထားပြီး ဆက်သွယ်ရေးမှ ဘေလ်တောင်းကြည့်ပါ။
ဒုတိယနည်း- မိမိဖုန်းကို တခြားဖုန်းဖြင့်ခေါ်ပါ Ring မြည်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီး မိမိဖုန်းကိုချက်ချင်းပိတ်ပြီး ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါ။ Ring ၀င်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ....... မိတ်ဆွေ FEC များများသာဆောင်ထားပါ။ (ပွားထားတဲ့သူက oversea တွေခေါ်ရင်ဆောင်ဖို့......... )။
ကဒ်ကို ဘယ်လိုပွားသလဲ၊ ဘယ်ကဒ်အမျိုးအစားတွေ ပွားလို့ရသလဲ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ကိုပရင့် ဧကရာဇ်၊ ကိုရောင်စိန်၊ ကိုရသာ၊ ကိုဇူဇူး တို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဖုန်းလိုင်းတွေ သိသလောက်(ထင်သလောက်)ပြောပြမယ်... ကြုံတုန်း........ မှားရင် ၀င်ပြောနော်...... အားမနာနဲ့...........
၁။ ဆယ်လူလာ (ရန်ကုန်၊ မန်းလေး၊ မိုးမိတ်) နောက်တစ်မြို့ကျန်သေးတယ်မေ့နေဘီ ဒါပဲရတယ်။
၂။ GSM 900 အခုသုံးနေကြတဲ့ g တွေပါ
၃။ CDMA 450 ကမ်းရိုးတန်း ဖုန်းပေါ့
၄။ CDMA ကဒ်
၅။ CDMA ကုဒ်
၆။ WCDMA (GSM 1800/1900) ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးချပေးတဲ့ဖုန်းတွေပါ။
၇။ Prepaid GSM (၂၀ တန်ဖုန်း)
၈။ Prepaid CDMA 450 (၅၀ တန်ဖုန်း)
၉။ CDMA 800 (အခု ပေးတော့မယ့် ၅ သိန်းတန်ဖုန်း၊ မြန်မာဖုန်းလောကတွင် စျေးအသက်သာဆုံးနှင့် နံပါတ် အသေရမယ့်ဖုန်း၊ ရန်ကုန်နှင့် မန်း နှစ်မြို့အတွက် အလုံးရေ ၂ သိန်း (ရန်ကုန် တစ်သိန်းခွဲ+ မန်း ငါးသောင်း) ချပေးပါမယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ ဒါပဲခင်ဗျ...... လိုအပ်တာ မပြည့်စုံတာ မှားတာ ရှိရင် ၀င်ပြောကြပါ.........
ပွားမဲ ့ပွား အိမ်က g ကိုပွားမယ်..
ပြီးတော ့ပွားရင် ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်..
ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ဖုန်းကဒ်လေး တစ်ခုပဲလိုမှာပါ......... ဥပမာ - ယိုးဒယား ဖုန်းကဒ် (DTAC, 12Call or True) လိုမျိုးပေါ့......... ပွားတဲ့ စက်ကတော့ မလွယ်ဘူးဗျ..... ရန်ကုန်မှာပွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်.... လူသိတော့မခံဘူးဗျ..... ကျွန်တော်လည်း စက်မရှိပါဘူး... စက်ရှိရင်လည်း ဒီအတိုင်း မနေရတော့ဘူး...... ဟီးဟီး........... ခရီးထွက်ခဲ့တုန်းက အတွေ့အကြုံလေး ပြန်ေ၀မျှတာပါ...........
ကိုစိုင်းရေ . .နောက်ထွက်မယ့် ၅ သိန်းတန်ဖုန်းကို စိတ်၀င်စားတယ်ဗျ. . . .ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးပဲရတာလား . .မော်ရွှေမြိုင်တို့ . .ဘာတို့မှာကောမရဘူးလား. . .နောက်ပီးဘယ်တော့ထွက်မှာလည်း . . .ဟိုလေ. .:39: 2010 ပြီးရလားဟင် . .:p
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်လဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်။မြ၀တီသွားတုန်းကပါ။ဒါနဲ့စကားမစပ် ကျနော် ကမြ၀တီရောက်ရင် အရင်ဆုံးဖုန်းကတ်ပြေးဖြည့်တာ 12call edge ကမိုက်တယ်ဗျာ။၉၉၉ ဘတ်ကို ulimit တဲ့ conn လဲgood တယ်နော် တနေကုန်အိမ်မှာအားအားရှိ ထိုင်ဒေါင်းနေတာ။ကျနော်ဒီတခေါက်သွားတာ pc မပါသွားတော့ iphone နဲ့ENG ပို့တွေတင်ရတာအဆင်မပြေဘူး။ခုဆို iphone က kb ရသွားဘီ။ကိုစေတန်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။true က3G ရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်လား ကိုစိုင်းရေ မြ၀တီကလူတွေကမသိကြဘူး။12call edge သုံးနည်းတောင်မနည်းgoogling လုပ်ထားရတာ။သိရင်ပြောပြပါဦး true ကတ်လေး၀ယ်သုံးရအောင်။
ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်နဲ့ မန်းလေးတောင် ကိုယ်လျှောက်ထားတဲ့မြို့နယ်မှာဘဲသုံးရမယ်လို့ကန့်သတ်ထားတယ်ဗျာ။
ကြားထဲက ၀င်ဖြေလိုက်မယ်နော် စိတ်စိုးရဘူး.:D
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လာမည့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့များ၌ ချထားပေးမည့်ကျပ်ငါးသိန်းတန် CDMA 800 MHz ဖုန်းများအတွက် လျှောက်လွှာများစတင်ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်.
ကျပ်ငါးသိန်းဖြင့် ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တော့မည့် CDMA 800MHz ဖုန်းများအား စတင်ချပေးမည့်အချိန်တွင် အလုံးရေ တစ်သိန်း၊ မန္တလေး၌အလုံးရေငါးသောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း. CDMA 800 MHz ဖုန်းများသည် မိမိလျှောက်လွှာတင်၍ ၀ယ်ယူစဉ်က လျှောက်လွှာပါ မြို့နယ်အတွင်းမှနေ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိ ခေါ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည် ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါက ဗဟန်းမြို့နယ် လိပ်စာအတို်င်း လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ CDMA 800 MHz ဖုန်းများသည် ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း၌သာ တည်ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ်ပြင်ပရောက်သွားပါက ဆက်သွယ်မှုများ ခက်ခဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
ရန်ကုန်၊ မန်းတလေး၊ နေပြည်တော် မှာ သုံးဖို့ ပေးမှာပါဗျာ. နောက်ထပ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာသို့လည်း တိုးချဲ့ဖို့ စမ်းသပ်နေတယ်လို့ ကြားဖြတ်သတင်းတစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်
အသုံးပြုသူသည် ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါက ဗဟန်းမြို့နယ် လိပ်စာအတို်င်း လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ CDMA 800 MHz ဖုန်းများသည် ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း၌သာ တည်ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ်ပြင်ပရောက်သွားပါက ဆက်သွယ်မှုများ ခက်ခဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
ဟီးဟီး............ လည်လည်တောင် မသွားရဲတဲ့ ဖုန်းတွေ။ ငယ်ငယ်က Cordless တွေ ကိုင်ခဲ့ရသလိုမျိုးပေါ့၊ အိမ်က Cordless တစ်လုံးဆင်ပေးထားတယ်။ ၅ မိုင်ထက်ပိုပြီး ေ၀းေ၀း မသွားအောင်လို့( ခိုးခိုးပြီး သီပေါသွားတတ်လို့ )။ အခု GPS ထက်တောင် တိကျသေး။ ခေါ်မရရင် သေဖို့သာပြင်ပဲ........ ခုလည်း ချစ်ချစ် ကို တစ်လုံးလိပ်စာနဲ့ လျှောက်ပေးထားလိုက်မယ်.. ခေါ်မရရင် သေဖို့သာပြင်............... :P:P:P
ငါးသိန်းတန်ဖုန်းကတော့ အများကြီး ချမပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဗျာ...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ gsm တွေစျေးကျမှာဆိုးလို့ပါတဲ့...ရန်ကုန်အတွက် ငါးသောင်း...နေပြည်တော်အတွက် ၂၀၀၀၀ လို့ပြောပါတယ်..မန်းအတွက်တောင် မပါသေးပါဘူးဗျာ...ရန်ကုန်မှာ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁ မြို့နယ်ရှိပါတယ်...တစ်မြို့နယ် ကို 4500 လောက်သာ ချပေးမှာပါ.. အရင် က gsm နာမည်ပေါက်နဲ့ရထားတဲ့လူတွေကိုတော့ ချမပေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ..
aungkmin wrote: »
နေပြည်တော်ပါ ရတယ်ဆိုလို့ စိတ်၀င်စားတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာသာနေတာ အလုပ်က နေပြည်တော်မှာဆိုတော့ နေပြည်တော်မှာပဲအနေများတယ်လေ။g ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းနေပြည်တော်မရဘူးလေ။
တစ်မြို့နယ် ၄၅၀၀ ဆိုတော့ ကုန်သွားလောက်ပြီလား မသိ။သိတဲ့သူများဖြေပေးကြပါ။
၅ သိန်းဆိုတော့လည်း ၀ယ်ကြမှာလေ။အဲ စျေးသက်သာလေ ကန့်သတ်ချက်များလေလား မသိ။
(ဟီးးးး ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် သူများပြောတာကြားတာ)
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်တောင်လျှောက်လိုက်သေးတယ် ခုချိန်ထိတော့ ဘာမှ မထူးသေးဘူး
ဖောင်ကို ရန်ကုန်မှာ အရင်တုံးက gsm လျှောက်လွာတွေ ရောင်းသလို လမ်းဘေးမှာ ၀ယ်လို့ရတယ်
လျှောက်လွာ ၁စုံ ၀ယ်ပြီး ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေးကို ၁ဆောင်တင် နေပြည်တော် မှာ ၁ ဆောင်တင် ရတယ်
မကောင်းတာတခု က ကိုယ်လျှေက်ထားတဲ့ နယ်မြေမှာပဲ သုံးလို့ရနိုင်မယ် တခြားတော့ ဘယ်ကိုမှာ ယူသွားလို့မရဘူး
ကိုယ်က ခု နေပြည်တော်လိပ်စာနဲ့လျှောက်လိုက်တာဆိုရင် နေပြည်တော် အပြင်ကိုထွက်မသွားတဲ့ ဘာမှ သုံးလို့မရတော့ဘူး
အဲ့တိုင်းပဲ ရန်ကုန်လိပ်စာဆို ရန်ကုန်မှာပဲ သုံး ဒါပေမယ့် ဖုံးခေါ်ဆိုခ တော့ ဘယ်လောက်ရှိမလည်း မသိဘူး
gsm အတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူး ကျွန်တော် တို့ ကြိုးဖုံး တွေတောင် အိမ်မှာ ထားပြီးသုံးနေကြသေးတာပဲနော်
(ကျွန်တော ပြောတဲ့ အထည်းက အမှားများပါရင် ပြင်ပေးကြပါ ကျွန်တော် ကိုတိုင်လည်း ဒီတိုင်းပဲ သိထားတာပါ)
phone ပွားချင်ရင် card reader နဲ့ အခြားစက်တွေ မသုံးဘဲ ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပြီး ပွားလို့မရဘူးလားဗျာ . . .